अब ओलीको शर्त– पार्टी एकताका दिशामा जाने हो भने प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गरेर माफी माग्नुपर्छ – bampijhyala.com
Home > समाचार > राजनिती > अब ओलीको शर्त– पार्टी एकताका दिशामा जाने हो भने प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गरेर माफी माग्नुपर्छ
१३ मंसिर २०७७, शनिबार २०:५१ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । अन्तरद्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेपछि आफ्नै सहयोद्धा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावको जबाफमा ३८ पृष्ठ लामो लिखित प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा वितरण गरेलगत्तै केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि प्रचण्डसामू दुई महत्वपूर्ण शर्त अघि सारेका छन्।
ओलीले पार्टी एकताको दिशामा जाने हो भने प्रचण्डले सबैभन्दा पहिले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने दुई शर्त अघि सारेका हुन्।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले आफ्नो प्रस्ताव वितरण गरेलगत्तै सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले अवैधरुपमा सचिवालय बैठकमा कात्तिक २८ गते पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव फिर्ता लिएमा र आफूसँग माफी मागेमा मात्रै पार्टी एकता अघि बढ्ने शर्त राखेका हुन्।
स्रोतका अनुसार ओलीले भनेका थिए, ‘प्रचण्डजीको प्रस्ताव झुटको पुलिन्दा हो। यसलाई बैठकमा औपचारिक रुपमा दर्ता र छलफल गर्न मिल्दैन। यो पार्टी एकताका दिशामा जाने हो भने प्रचण्डले प्रस्ताव लिनुपर्छ र माफी माग्नुपर्छ।’ यस्तै ओलीले प्रचण्ड पक्षलाई इंगित गर्दै बहुमत र अल्पमतको खेल आफूले अस्वीकार गर्ने अडान लिएका छन्। उनले बैठकमा भनेका छन्, ‘मान्छे तानेर केही हुन्न भन्ने तपाईँहरुले राम्ररी बुझे हुन्छ। पार्टी एकताका बेला जे सहमति भएको थियो त्यसैमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ।’
ओलीको शर्तपछि प्रचण्ड झनै आक्रोशित भएका थिए। उनले तत्कालै ओलीले चार–चार पटक पार्टी फुटाउने प्रयास गरेको र त्यस्तो प्रयास अब सफल नहुने जबाफ फर्काएका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले ओलीलाई भनेका थिए, ‘तपाईँले चार–चार पटक पटक पार्टी फुटाउने कदम चालेको हो। अध्यादेश ल्याएको हामीले भुलेका छैनौँ। सांसद अपहरण गरेको पनि भुलेका छैनौँ। पार्टीका एकताका लागि तपाईँले शर्त राख्न बेकार छ। पार्टी एकताको रक्षा हामीले गर्ने हो।’
त्यो सँगै प्रचण्डले ओलीमा अझै धेरै दम्भ र अहंकार बढेको निष्कर्ष सुनाएका थिए। स्रोतका अनुसार प्रचण्डले आफ्नो गल्ती कहिल्यै स्वीकार नगर्ने र त्यसबारे समीक्षा पनि गर्न मन नपराउने ओलीमा अंहकार झन बढेको बताएका हुन्।
‘तपाईँमा झन धेरै अहंकार र दम्भ भरिँदै गएको छ। तपाईँको प्रस्ताव विस्तृमा अध्ययन गरौँला तर मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार तपाईँले लिखितरुपमा मलाई लगाउनुभएका आरोप नै विवादको जड हो,’ ओलीलाई प्रचण्डले लगाएको आरोप उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
यस्तै बैठकमा सहमत गराउन ओलीलाई मनाउन गरेको प्रयासबारे पनि प्रचण्डले शनिबारको सचिवालय बैठकमा स्पष्ट पार्ने कोशिस गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले ओलीलाई सोधेका थिए, ‘तपाईँ सचिवालय बैठक बसोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो? कति दबाब दिनुपर्‍यो तपाईँलाई बैठकका लागि सम्झना छ? बैठक नडाकिएको भए पार्टी कहाँ पुग्थ्यो?’ यस्तै प्रचण्डले आफूहरुको निरन्तर संघर्षका कारण बैठक बस्न सफल भएको र अब बैठकको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने पनि बताएका थिए।
यस्तै प्रचण्डले पार्टीमा पेश गरिएका प्रस्ताव र पत्रहरु मात्रै नभई सचिवालयमा आफूले बोलेका कुराहरुसमेत रेकर्ड गरेर पत्रपत्रिकामा दिएपछि मात्रै आफूले समग्र पत्रहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर वितरण गरेको बताएका थिए।
शनिबारको बैठकमा प्रचण्डको धारणामा यसअघि झै उनलाई साथ दिइरहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले समर्थन गरेका थिए। उनीहरुले पनि ओलीलाई दम्भ र अंहकार नत्यागेसम्म सहमति र सहकार्यको सम्भावना नरहने सुझाव दिएका थिए।
नेता नेपालले बालुवाटार गरेको गुटबन्दीलाई गुटबन्दी नमान्ने, आफूहरु एकदुई जना नेता छलफलमा बस्दा गुटबन्दी भन्दै ओलीलाई प्रश्न तेर्स्याएका थिए। उनले ओलीलाई भनेका थिए, ‘गुटबन्दीको स्पष्ट परिभाषा चाहियो? सचिवालय पार्टीको सर्वोच्च अंग हो। यसको निर्णय तपाईँले मान्नुपर्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा गम्भीर त्रुटि छ। यसलाई नसच्याएसम्म सहमति गर्न सकिन्न।’
नेता खनालले पार्टीमा विधि, पद्धति र विचार लगायत विषयमा अन्तरविरोध भएको प्रस्ट भएकाले नियमअनुसार नै अब समाधान गर्नुपर्ने बताए। यस्तै खनालले हालको अन्तरसंघर्ष र धम्कीले पार्टी फुट्न नदिने पनि बताएका थिए।
त्यसपछि अरु सदस्यहरु बोल्न खोज्दा अर्को सचिवालय बैठकको मिति तोक्न उचित हुने ठहर गरिएको थियो।
चिनियाँ रक्षामन्त्री आइतबार आउने भएकाले पर्सि एक दिन प्रस्ताव अध्ययनको समय लिएर १६ गते सचिवालय बैठक तोक्न नेताहरु सहमत भएका थिए।
ओलीले पेश गरेको प्रस्तावमा प्रचण्डका विगत र हालका गतिविधिलाई जोडेर ५३ बुँदामा आरोप लगाइएको छ। यो प्रस्ताव अध्ययन गरी आगामी १६ गते पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवाल बैठकमा छलफल गर्ने सहमति नेताहरुले गरेका छन्।
नेकपा नाम विवादमा आज सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै १३ मंसिर २०७७, शनिबार २०:५१
छोटो समयमै दश लाख भन्दा बढि दर्शक र श्रोता बटुल्दै “उखु गुलियो” (भिडियो सहित) १३ मंसिर २०७७, शनिबार २०:५१
आजदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना खोप, आज सुरूमा प्रधानमन्त्रीले कोरोना खोप लगाउने १३ मंसिर २०७७, शनिबार २०:५१
भारतमा एकै दिन थप १८ हजार नयाँ संक्रमित , १०८ जनाको मृत्यु १३ मंसिर २०७७, शनिबार २०:५१
बिरालोले उडिरहेको विमानका पाइलटमाथि आक्रमण गरेपछि… १३ मंसिर २०७७, शनिबार २०:५१